स्वास्थ्यकर्मी कर्माचार्यसँग संगीत वार्ता : भन्छन् - अब सांगीतिक क्षेत्रमा ग्याप गर्दिनँ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यकर्मी कर्माचार्यसँग संगीत वार्ता : भन्छन् - अब सांगीतिक क्षेत्रमा ग्याप गर्दिनँ
शनिबार, असोज ११, २०७६, १६:१०:००
राजु कर्माचार्य पाटन अस्पतालका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन हुन्। तर उनको संगीत मोह भने अटुट छ। फुर्सदको समय संगीतमा लगाउने उनले आफ्नै शब्द, स्वर र संगीतमा एल्बमसमेत निकालेका छन्। स्वास्थ्यखबरको शनिबारीय स्तम्भ जीवनशैलीका लागि बुनु थारूले गरेको संक्षिप्त संगीत वार्ताः
संगीतमा कसरी आकर्षित हुनुभयो? कहिलेदेखि गाउन थाल्नुभएको हो?
हाम्रो स्कुलमा कक्षा ९ र १० मा संगीत कक्षा हुन्थ्यो। संगीत सिक्न थालेदेखि मलाई यसले आकर्षित गर्‍यो। मैले स्कुलको शुक्रबारका अतिरिक्त क्रियाकलापमा नछुटाई भाग लिने गर्थेँ।
पहिलो रेकर्डड गीत कुन थियो?
मैले पहिलोपटक २०५७ सालमा नेपाल भाषाको गीत रेकर्ड गराएको थिएँ। बीचबीचमा फाटफुट्ट गाउने भए पनि आफ्नो कामको व्यस्तताले निरन्तरता दिन सकिनँ। अहिले भने अलि समय मिलाएर एल्बम निकालेको छु।
हालै निकालेको एल्बममा कस्ता गीत छन्?
मलाई आफ्नो मातृभाषाप्रति लगाव छ। यसका साथै गाउन पनि केही सजिलो हुने भएकाले नेपालभाषाको गीत रोजेको हुँ। मेरो यो पहिलो एल्बम हो। 'न्हापांगु पलाः' अर्थात् पहिलो पाइला भन्ने एल्बमको नाम हो। यसमा ७ वटा गीत रहेका छन्।
रक, सेन्टिमेन्टल, रोमान्टिक, क्लासिकल सबै फ्लेभरका गीत यो एल्बममा समेटिएका छन्। साथै ५ वटाको म्युजिक भिडियोसमेत बनेको छ। सबै गीत सोलो हुन्। आफ्नै स्वर, संगीत र शब्द छ।
एल्बमबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नुभएको छ?
राम्रै प्रतिक्रिया पाएको छु। सबैले सकरात्मक तरिकाले हेरिदिनुभएको छ। नेपाली गीत पनि ल्याउनुपर्‍यो भन्नुभएको छ। भविष्यमा नेपाली भाषाको एल्बम आउनेछ।
नेपाली भाषामा पनि गीत गाउनुभएको छ?
गाएको छु। नेवारीबाहेक नेपाली संगीतमा पनि रुचि छ। आफ्नो गायकी अरु भाषामा पनि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। गायिका इन्दिरा जोशीसँग 'मेरो देश नेपाल' बोलको गीत गाएको छु। अरु पनि गर्दैछु। ५ वटा नेपाली गीत गाइसकेको छु।
अहिलेसम्म कति वटा गीत गाउनुभएको छ?
अहिलेसम्म नेवारी र नेपाली गरी दर्जनभन्दा बढी गीत गाइसकेको छु। विभिन्न कार्यक्रमको वार्षिकोत्सव, अनि भूकम्पका गीतहरु पनि कम्पोज गरेर गाएको छु।
सांगीतिक क्षेत्रमा भविष्यको अरु योजना के छ?
संगीतमा धेरै रुचि भएको मान्छे हुँ। जति व्यस्त भए पनि दिनको १ घन्टा रियाज गर्न छुटाउदिनँ। पहिला ग्याप भयो, समय दिन सकिएन। अब यस क्षेत्रमा ग्याप नगर्ने विचार छ। नेपाली गीत तयार हुँदैछन्। छिट्टै बजारमा आउँछन्।